Fitaovana fanarenana tenimiafina Outlook. Rindrambaiko fanarenana tenimiafina PST.
DataNumen Outlook Password Recovery dia fitaovana matanjaka hamerenana ny teny miafina avy amin'ny rakitra Outlook PST voahidy. Raha manadino ny tenimiafin'ny rakitra PST misy encrypt ianao, dia amin'ity fitaovana ity dia azonao atao ny mamerina indray ny teny miafinao ary miditra amin'ny atiny ao amin'ny fisie PST.
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,637)
Nahoana DataNumen Outlook Password Recovery?
Nandany adiny 5 aho androany nitady tranokala nanolotra Outlook Password Recovery maimaim-poana na tsy lafo. Hitako ihany tamin'ny farany DataNumen izany tonga lafatra
Houston, Texas, Etazonia
Hanamarika ny tranokalanao ve raha sanatria ka mila mividy
Endri-javatra lehibe ao DataNumen Outlook Password Recovery v1.2
Tohano ny fisie Microsoft Windows 97 ka hatramin'ny 2019 ary ny fisie ho an'ny fisie Windows Office 365.
Tohano hamerenana ny teny miafinao amin'ny rakitra PST misy encrypt.
Ampifangaroina miaraka amin'ny akorandriaka Windows, mba hahafahanao mamerina ny teny miafina momba ny fisie PST misy encrypt miaraka amin'ny tabilao (tsindrio havanana) menio Windows Explorer mora foana.
mampiasa DataNumen Outlook Password Recovery hamerenana ny tenimiafina avy amin'ny fisiefanao rakitra PST Outlook
Rehefa voahodina ny rakitra PST anao ary hadinonao ny tenimiafiny dia afaka mampiasa ianao DataNumen Outlook Password Recovery hizaha ny fisie PST ary hamerina ny teny miafina.
Fanamarihana: Alohan'ny hamerenanao ny teny miafina avy amin'ny rakitra PST Outlook PST misy encrypt DataNumen Outlook Password Recovery, azafady manakatona ireo rindranasa hafa mety manova ny rakitra PST.
Safidio ny rakitra Outlook PST misy encrypt izay manana ny tenimiafinao ho azo averina:
Azonao atao ny mampiditra mivantana ny anaran'ny fisie PST na tsindrio ilay
bokotra hahitanao ilay rakitra PST voahidy amin'ny solosaina eo an-toerana.
bokotra, ary DataNumen Outlook Password Recovery start scanning ary avereno ny tenimiafinao ho an'ny fisie PST misy rakitra. Bara fandrosoana
Aorian'ny fizotry ny fanarenana, raha toa ka azo averina soa aman-tsara ny teny miafinao ao amin'ny fisie PST misy encrypt, dia hahita boaty misy hafatra toy izao ianao:
Azonao atao ny manindry ny
bokotra handikana ny teny miafina amin'ny tabilao, avy eo ampiasao hanokafana sy hidiranao ilay rakitra PST voahidy ao amin'ny Outlook.
Fanamarihana: Mety tsy hitovy amin'ilay nampiasanao ny teny miafina, fa afaka manokatra ny fisie PST misy encrypt tsy misy olana.
DataNumen Outlook Password Recovery Navoaka tamin'ny 1.2 Novambra 9 ny 2020
DataNumen Outlook Password Recovery 1.1 dia navoaka tamin'ny 17 Jona 2020
DataNumen Outlook Password Recovery 1.0 dia navoaka tamin'ny 20 Oktobra 2014
Tohano ireo rakitra PST misy encrypt an'ny Microsoft Outlook 97 hatramin'ny 2016.